यस्ता छन् कोरोना भ्रम र यर्थाथका २४ बुँदा | Sabaiko Online
Home Flash News यस्ता छन् कोरोना भ्रम र यर्थाथका २४ बुँदा
यस्ता छन् कोरोना भ्रम र यर्थाथका २४ बुँदा
कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वव्यापी महामारी भएपछि यसबारेमा अनेक भ्रम र हल्ला पनि फैलाइएको छ। कोराना भाइरससम्बन्धी वास्तविक जानकारी नहुँदा आम मानिसहरू विभिन्‍न हल्ला र भ्रमबाट अत्तालिएको अवस्था छ। भ्रमको पछि लाग्दा विभिन्‍न घट्नाहरु पनि भएका छन्। कोरोना भाइरस सम्बन्धी गलत हल्ला र भ्रमहरूलाई चिर्दै सही जानकारी दिनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनिसेफ नेपालले कोरोना भ्रम र यर्थाथका २४ बुँदा तयार गरेको छ। त्यसलाई यहाँ जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिएको छ।
के कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) लामखुट्टेको टोकाईबाट सर्छ ?
हालसम्म कोरोना भाइरस लामखुट्टेको टोकाईबाट सरेको पुष्टि भएको छैन । यो श्वासप्रश्वासबाट सर्ने भाइरस हो । कोरोना भाइरसबाट संक्रमित व्यक्त्तिले खोक्दा र हाँच्छ्यु गर्दा निस्कने थुक र सिँगानको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्त्तिमा सर्दछ ।
के लसुन खानाले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ ?
के तिलको तेलको मालिसले कोरोना भाइरस शरीरमा प्रवेश गर्नबाट रोक्छ ?
तिलको तेलले मालिस गर्नाले कोरोना भाइरस शरीरमा प्रवेश गर्नबाट रोक्दैन । तिलको तेलले कोरोना भाइरसलाई मार्न सक्दैन । भुई वा सतहमा भएको कोरोना भाइरसलाई निःसंक्रमण गर्न ७० प्रतिशत इथानोल, ०.५ प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइटहरू भएको रसायन वा घोलक, प्रयोग गर्नुपर्छ । यी रसायनहरू कहिले पनि मानिसको शरीरमा प्रयोग गर्न हुदैन । यस्ता रसायनहरू छालामा परेमा हानिकारक हुन्छ ।
के पानी पिउनाले घाँटी दुखेको निको हुन्छ, र कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बचाउँछ ?
यो कोरोना भाइरसले वृद्धवृद्धालाई मात्र बढी असर गर्छ कि युवावर्ग पनि यसको जोखिममा पर्छन् ?
सबै उमेर समूहका मानिस कोरोना संक्रमित हुन सक्छन् । तर ज्येष्ठ नागरिक र पहिले देखि नै दम, मधुमेह, मुटुको रोग जस्ता स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई भने यो भाइरसले गम्भीर बिरामी बनाउने जोखिम हुन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार यस भाइरसबाट बच्नको लागि बेलाबेलामा साबुन पानीले मिचिमिचि हात धुने वा अल्कोहल भएको स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी सरसफाईमा विशेष ध्यान दिने जस्तै खोक्दा, हाँच्छ्यु गर्दा नाक मुख छोप्नु पर्दछ ।
के कोरोना भाइरसबाट बच्न र संक्रमितो उपचारको लागि एन्टिबायोटिकको प्रयोग प्रभावकारी हुन्छ ?
एन्टिबायोटिकमा जिवाणु विरुद्ध मात्र लड्न सक्ने क्षमता हुन्छ । त्यसैले यसको प्रयोगले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सकिदैन् । कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि अस्पताल भर्ना भएमा शरीरमा ब्याक्टेरियाको संक्रमण पनि हुनसक्ने भएकाले चिकित्सकले एन्टिबायोटिक दिन सक्छन् ।
कोरोना भाइरसबाट बच्ने वा उपचार गर्ने कुनै औषधि छ ?
हालसम्म कोरोना भाइरस उपचारको लागि कुनै औषधि पत्ता लागिसकेको छैन । तर संक्रमितलाई देखिएको लक्षण अनुसारको औषधि उपचार गरी स्याहार गर्नुपर्छ । यस भाइरसबाट संक्रमित गम्भीर बिरामीलाई अस्पतालमा भर्ना गरी लक्षण अनुसारका विशेष उपचार तथा स्याहार गरिन्छ ।
यसको उपचारको बारेमा धेरै देशहरुमा अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले साझेदारहरुसँगको समन्वयमा यस विषयमा अध्ययन र अनुसन्धानलाई तीव्र रुपले अघि बढाइरहेको छ।
के हात सुकाउने मेसिन (ह्यान्ड ड्रायर) कोरोना भाइरस मार्नका लागि प्रभावकारी हुन्छ ?
के चीनबाट आएको चिठी पत्र वा कुनैपनि सामान लिनु सुरक्षित हुन्छ ?
के युभि किरण (अल्टा भ्वाइलेट प्रकाश)ले कोरोना भाइरस मार्न सक्छ ?
युभि किरणले कोरोना भाइरसलाई मार्न सक्दैन । तर यस्ता विकिरणले हात वा शरीरका अन्य अंगहरुमा एलर्जी गराउन सक्छ ।
विमानस्थलमा राखिएको थर्मल स्क्यानरबाट कोरोना भाइरस संक्रमित भए वा नभएको थाहा पाउन कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ ?
के पुरै शरीरमा अल्कोहल वा क्लोरिन लगाएमा वा छरेमा कोरोना भाइरस मर्छ ?
शरीरभित्र कोरोना भाइरस प्रवेश गरिसकेपछि अल्कोहल वा क्लोरिन पुरै शरीरमा लगाउँदा वा छर्कदा यो भाइरस मर्दैन । बरु यसरी छर्कनाले तपाईको लुगा वा शरीरमा रहेका स–साना छिद्रहरुका साथै आँखा, मुख, नाक आदिमा हानी पुग्न सक्दछ । तर सहि मात्रामा प्रयोग गर्नाले खण्डमा अल्कोहल र क्लोरिनले भुइँ वा सतहलाई निःसंक्रमण गर्न मद्दत गर्दछ ।
के घरपालुवा जनावरबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन वा सर्न सक्छ ?
हालसम्म घरपालुवा जनावर जस्तै कुकुर, बिरालोआदि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको पुष्टि भएको छैन । तर घरमा पालिएका जनावरलाई छोए पश्चात सधैं साबुन पानीले मिचिमिचि हात धुनुपर्छ । यसरी साबुनपानीले हात धोएमा घरपालुवा जनावरबाट मानिसमा सर्न सक्ने ‘इकोली’ र ‘साल्मोनेल्ला’ जस्ता विभिन्न जीवाणुका संक्रमणबाट सुरक्षित हुन्छ ।
के निमोनिया विरुद्धको खोपले हामीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बचाउँछ ?
निमोनिया विरुद्धका खोपहरू जस्तै ‘न्युमोकोकल भ्याक्सिन’ र ‘हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा’ टाइप बी भ्याक्सिनले कोरोना भाइरसबाट जोगाउन सक्दैन । यो नयाँ र फरक किसिमको भाइरस भएकोले यसको लागि छुटै प्रकारको खोप चाहिन्छ । कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको विकासका लागि अनुसन्धान भइरहेको छ तर अहिलेसम्म पत्ता लागिसकेको छैन । निमोनिया विरुद्धका खोपहरू कोरोना भाइरस रोकथाम गर्नका लागि उपयोगी नभए तापनि श्वासप्रश्वासको समस्याबाट बच्न यी खोपहरू स्वास्थ्यका लागि लगाउन सिफारिस गरिन्छ ।
के नियमित स्लाईन पानीले नाक सफा गर्नाले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ ?
हालसम्म स्लाईन पानीले नियमित नाक सफा गर्नाले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सकिने प्रमाण फेला परेको छैन । स्लाईन पानीले नियमित नाक सफा गर्नाले रुघा चाँडो निको भएको केही तथ्यहरू भने छन् ।
के माउथवासले मुख कुल्ला गर्नाले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ ?
माउथवासको प्रयोगले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सकिने कुनैपनि प्रमाण हालसम्म फेला परेको छैन । केही कम्पनीका माउथवासहरुको प्रयोगले मुखभित्र ¥यालमा रहेका भाइरसलाई केही समयका लागि निर्मुल गर्ने भएता पनि यसले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट भने सुरक्षित गर्न सक्दैन ।
के कोरोना भाइरस गर्मी मौसममा वा आद्रता भएको तापक्रममा बाँच्न सक्छ ?
कोरोना भाइरस गर्मी वा जाडो र आद्रता वा सुख्खा तापक्रम भएका सबै ठाउँहरुमा फैलिसकेको छ । गर्मी वा जाडो जहाँ बस्ने भएपनि सावधानी अपनाउनुपर्छ । खोक्दा वा हाँच्छ्यु गर्दा नाक, मुख हात वा टिस्यु र कुहिनाले छोप्ने गनुपर्छ ।
के रक्सी पिउनाले कोरोना भाइरसको संक्रमण हुँदैन ?
भुइँ वा सतहहरुलाई निःसंक्रमण कसरी गर्न सकिन्छ ?
भुइँ वा सतह फोहर छ भने पहिला साबुन वा सर्फ पानीले भुइँलाई राम्ररी सफा गर्ने । बजारमा पाइने घरेलु निःसंक्रमणमा प्रयोग हुने क्लोरिनयुक्त रसायन वा घोलकले ब्याक्टेरिया र भाइरसलाई मार्दछ । यस्ता रसायन वा घोलकहरु प्रयोग गर्दा सधैं पञ्जा लगाउनुपर्छ । खाली हातले कहिलेपनि प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
धुम्रपान वा चुरोटले कोरोना भाइरसलाई असर गर्छ ?
पसलमा स्यानिटाइजर नपाएमा के गर्न सकिन्छ ?
स्यानिटाइजर नभएमा पनि केही हुँदैन । बेलाबेलामा साबुन पानीले मिचिमिच हात धोएमा कोरोना भाइरसको जोखिम कम हुन्छ। हात धुँदा औंलाको बीचमा, हातको अगाडि र पछाडि र नङलाई पनि राम्ररी धुनुपर्छ ।
के दिसाबाट कोरोना भाइरस सर्छ ?
अन्य कोरोना भाइरस जस्तै यो नयाँ कोरोना भाइरस २०१९ दिसामा पनि पाइन्छ । यसबाट संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा र हाँच्छयु गर्दा नाक र मुखबाट निस्कने छिटाहरुबाट एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्दछ । त्यसैले यसको संक्रमणबाट बच्न बेलाबेलामा साबुन पानीले हात धुने वा अल्कोहल भएको स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने, खोक्दा र हाँच्छयु गर्दा नाक र मुख हात वा टिस्यु वा कुहिनाले छोप्ने, साबुन पानीले हात धुने र रुघाखोकी लागेको व्यक्तिबाट टाढा बस्ने ।
नाली वा ढलबाट आउने हावा, गन्धबाट पनि कोरोना भाइरस हुनसक्छ ?
ढल वा नालीबाट आउने हावा, गन्धमा श्वास फेर्दा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको तथ्य हालसम्म पाइएको छैन । हालसम्मको तथ्य अनुसार कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा र हाँच्छ्यु गर्दा नाक र मुखबाट निस्कने छिटाहरु र संक्रमित व्यक्तिसँगको नजिकको सम्पर्कबाट एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्दछ ।
के बोझो, लसुन वा बेसार खानाले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ ?
नेताको हात समाएर पिडीत कार्यालयमा आउने अबस्थाको अन्त्य गर्छु : डिएसपी वुढाथोकी
अपमान र गलत कुरा सहेर बस्न सकिँदैनः माधव नेपाल
कोरोनाविरुद्धको खोप पाउँदा हौसिए शिक्षक
नेताको हात समाएर पिडीत कार्यालयमा आउने अबस्थाको अन्त्य गर्छु : डिएसपी...
मृगौला पीडितलाई पर्वत सेवा समाज नेपालको सहयोग